Lahatsary niparitaka be niteraka adihevitra momba ny fanorisorenana ara-nofo ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Solombavambahoaka taloha sady mpampianatra amina oniversite hita anaty lahatsary misafo vodim-behivavy mpiasa
Voadika ny 09 Mey 2021 9:45 GMT
Pikantsary nalaina tamin'ny lahatsary fanadihadiana nataon'ny Lachin TV https://www.youtube.com/watch?v=oOm8ML0NaV4
Tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity. Dika somary nasiana fanovàna kely no naverina navoaka etoana, ao anatin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Ny 22 Aprily, taorian'ny nahitana azy tamin'ny camera nikitika ny fitombenan'ny mpiasa vavy iray, voaroaka tao amin'ny Anjerimanontolo nampianarany ilay Azerbaijani solombavambahoaka taloha, Huseynbala Miralamov.
Tao anatin'ilay lahatsary, nitsiky aloha ilay vehivavy tamin'ny voalohany, saingy rehefa tonga sainy izy fa hay ry zareo ka raketina an-dahatsary, dia notakonany ny tavany, noho ny hatairany ary lasa izy nandositra. Vetivety foana ilay lahatsary dia niely be tao Azerbaijan tamin'ny 21 Aprily, izay nanaparitahan'ireo mpilaza vaovao tao an-toerana azy nefa tsy nafenina akory ny tavan'ilay vehivavy.
Tena niparitaka be tokoa ilay tantara, hany ka na ilay mpanentana fandaharana resadresaka rehefa hariva amin'ny fahitalavitra ao Etazonia aza, Jimmy Kimmel, dia nampiditra azy tamin'ny iray tamin'ireo kabary tsy valiana fanaony, ary dia mbola tsy nafenina ihany koa ny endrik'ilay vehivavy teto. Efa nesorina tsy ho ao amin'ny fantsona Youtube an'i Kimmel moa ilay kabary tsy valiana, saingy efa marobe sahady ireo dika nakarin'ireo mpisera.
Bahruz Nazarov, tale-na departemanta iray ao amin'ny Anjerimanontolo momba ny solika sy ny indostria ao Azerbaijan (ASOIU), toerana niasàn'i Miralamov, nilaza tamin'y Report.az fa efa nesorina tamin'ny andraikiny ity farany no sady nalàna tsy ho mpampianatra.
Miralamov ihany koa dia nahiliky antoko politika Azerbaidjan Vaovao eo amin'ny fitondrana, izay naha-mpikambana azy tao amin'ny Filankevitr'ireo Bekotro Maroholatra ary nitazonany ny toerana maha-filohan'ny rantsan'ny antoko tao amin'ny distrikan'i Khatai.
Tao anaty antsafa iray niarahana tamin'ny Unikal.org, nolavin'i Miralamov ny fisian'ny fiarahany amin'ilay vehivavy hita tao anaty lahatsary. “Naharay fampitahorana aho,” hoy izy. “Kaonferansan'ny oniversite izy iny. Tsy maintsy ho hita izay olona nandefa iny lahatsary iny.”
Na dia tsy neken'ny sain'ny rehetra teny anaty tambajotra sôsialy aza ilay zava-niseho, nisy kely ihany ireo nanaiky momba ny karazana tranga tena nasehon'ilay lahatsary sy ny hoe an'iza ny hadisoana.
Ilay mpikatroka mpiaro ny zon'ny vehivavy, Gulnara Mehdiyeva, nilaza tamin'ny OC Media fa niteraka adihevitra ilay tranga, adihevitra momba izay mandrafitra ny atao hoe fanorisorenana ara-nofo any amin'ny toeram-piasàna ary ny fizotry ny fahefana eo amin'ireo lehilahy efa nahazo taona toa an'i Miralamov sy ny olom-peheziny.
“Dia efa andrasan'ny olona fotsiny ny hoe toy ny zaza no andraisan'ireo zokiolona ny andian-taranaka tanora aty aoriany, izay mila atoro ny fomba fiaina,” hoy i Mehdiyeva. “Nisy ihany koa ireo izay nanameloka ilay vehivavy tany anatin'ireo fifanakalozan-dresaka. Ny ankamaroany dia ireo olona izay tsy nametraka fanontaniana/olana mihitsy momba ny resaka fanekena.”
Ireo izay nanameloka ilay vehivavy dia nahita ilay tranga ho toy ny “fijangajangana” sy fampiasàna ny “maha-vehivavy ho toy ny tombony azo araraotina,” hoy i Mehdiyeva. Vokany, tsy mampanontany tena azy ireo “raha toa ka nanaiky ilay vehivavy” na “nahoana izy no nanao izany.”
“Raha raisina amin'ny heviny rehetra aza ilay teny, na atao hoe manaiky aza ilay vehivavy, ilay lehilahy ihany no hany mbola manana tombon-dahiny voalohany. Tsy maintsy hametrahana fanontaniana ihany koa ny tombon-dahiny ananan'ny lehilahy.”
Zhala Bayramova, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona no sady mpikatroka mpiaro ny zon'ny vehivavy, nilaza tamin'ny OC Media fa endrika ivelany ihany no ijeren'ny rafitra lalàna Azerbaijani ny fanorisorenana ara-nofo. Nilaza izy fa mino hoe na milaza aza ny Lalàna Mifehy ny Asa fa adidin'ny mpampiasa ny mandray fepetra hisorohana ny fanorisorenana ara-nofo, mbola mipetraka ihany ny fanontaniana hoe inona ireny fepetra ireny sy ny hoe tanteraka sa tsia io adidy io.
Ho azy, ny Lalàna momba ny fitovian'ny Lahy sy ny Vavy ao Azerbaijan dia manondro ny fanorisorenana ara-nofo, ny famotsofotsiana ary ny faniratsiràna olona iray amperin'asa na ao anatin'ny fifandraisana arak'asa, nateraky ny maha-avy amin'ny sokajy ankilany azy na noho ny fironana ara-pananahana ananany, tafiditra amin'izany ireo hetsika ara-batana (fikitikitihana, felaka, sns…) ny fiteny tsy maoty, ny fihetsika, ny fandrahonana, fanambatambazana na fanambatambazana manala baraka mety ho azo faritana ho toy ny fitondrantena tsy mendrika.
Amin'ny trangana fanorisorenana ara-nofo, ilay mpiasa irery ihany no afaka mampiato ny fifanarahana asa ary tsy maintsy mahazo onitra izy. Ireo olona voamarina fa meloka tamina fanorisorenana ara-nofo dia mety hiharan'ny sazy ara-bola 1.500 ₼ (900 dolara amerikàna) hatramin'ny 2.500 ₼ (1.500 dolara amerikàna).
Nolazain'i Bayramova tamin'ny OC Media fa ao anatin'ny famaritana ny atao hoe fanorisorenana ara-nofo dia faran'izay bitika raha ireo resaka voatanisa etoana.
“Tsy amin'ny fifaneraserana amin'ny asa na ny tolotra ihany no mety hitranga ny fanorisorenana ara-nofo, fa koa any anaty toedraharaha hafa, toy ny fifaneraseran'ny mpianatra sy mpampianatra, ireo manampahefana, sy ny sisa…” hoy i Bayramova. “Tsy misy rafitra famaizana ho an'ireny toedraharaha ireny.”
24 ora izayAzerbaijan